Nzọụkwụ 4 iji mejuputa ma ọ bụ ihichapụ data CRM iji bulie arụmọrụ ahịa gị | Martech Zone
Companieslọ ọrụ ndị chọrọ ịkwalite arụmọrụ ahịa ha na-etinyekarị ego na atụmatụ mmejuputa nke njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM) ikpo okwu. Anyị atụlewo ihe kpatara ụlọ ọrụ mejuputa CRM, na ụlọ ọrụ na-emekarị nzọụkwụ… ma mgbanwe na-adakarị n'ihi ihe ole na ole:
data - Mgbe ụfọdụ, ụlọ ọrụ na-ahọrọ ikpofu data nke akaụntụ ha na kọntaktị n'ime ikpo okwu CRM ma data ahụ abụghị. ọcha. Ọ bụrụ na ha emebelarị CRM, ha nwekwara ike ịhụ na data ahụ na-akụda mmụọ na enweghị ike iwepụta nloghachi na ntinye ego.ROI).
usoro - Ka ahịa wee nwee ike itinye CRM n'ezie, a ga-enwerịrị usoro na-eme ka ntozu nke ndu yana mkpa nke akaụntụ dị ugbu a. Companieslọ ọrụ kwesịrị ịnwe usoro iji bute ụzọ na akaụntụ ndị nwere ohere kachasị.
Ọrụ - A ga-ekenye ụzọ ọhụrụ na akaụntụ dị adị nke ọma na CRM, ma ọ bụ aka ma ọ bụ site na iwu mpaghara. Enweghị ọrụ, ọ nweghị ụzọ isi kwalite ọrụ ahịa.
akuko - A ga-emejuputa akuko ziri ezi, nke doro anya na nke a pụrụ ịdabere na ya maka ma ndị otu gị na-ere ahịa ka ha jiri CRM na ndị otu onye isi gị were ngwa ngwa.
Imelite - A ga-emejuputa atumatu akpaaka, ntinye, na usoro mmelite akwụkwọ ntuziaka maka CRM gị iji dokwaa izi ezi data na iji ghọta nke ọma nloghachi gị na itinye ego. Na-enweghị imelite CRM, reps na-ahapụ ikpo okwu na onye ndu anaghị adabere na ya.
Kwụpụ 1: Na-akwado ma ọ bụ hichaa data CRM gị
Data akaụntụ nwere ike ịdị n'ime CRM gị ugbu a, CRM ị na-esi na ya, mbupụ sistemụ ịgba ụgwọ, ma ọ bụ ọbụna naanị ụyọkọ akwụkwọ akụkọ. Kedu ụzọ ọ bụla, anyị na-achọpụtakarị ọtụtụ data ọjọọ nke chọrọ nchacha. Nke a na-agụnye ma ọnweghị oke na akaụntụ nwụrụ anwụ, kọntaktị ndị na-adịkwaghị adị, nnweta, akaụntụ oyiri, na akaụntụ anaghị ahazi (nne na nna / nwa).
Nzọụkwụ ndị a ga-eme iji nyochaa na mezie data gị gụnyere:
Ndebanye aha – Iji ndị ọzọ nhicha data ngwaọrụ dị na data firmagraphic ụlọ ọrụ yana data kọntaktị iji kwado, sachapụ, na melite data gị ugbu a. Nke a ga-eme ka ndị otu gị na usoro gị nwee ike ilekwasị anya na ozi ziri ezi kama ịgafe data ọjọọ na CRM.
Ọnọdụ - Ịmata ọnọdụ akaụntụ ugbu a, ọrụ, ego agbakwunyere, onye na-ere ahịa ekenye, ọkwa onye na-azụ ahịa, na kọntaktị bụ nnukwu nzọụkwụ na-ekewapụ ndekọ nke CRM gị kwesịrị ilekwasị anya na kama ibubata ụda kọntaktị na data akaụntụ na-abaghị uru.
Ndị isi ọchịchị – Akaụntụ na-enwekarị ọkwa metụtara ha. Ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ọfịs nọọrọ onwe ya, ezinụlọ nwere ọtụtụ ndị ahịa, ma ọ bụ
Ibute ụzọ - Mbupụ ego azụmaahịa metụtara akaụntụ gị bụ ụzọ dị mma iji kenye oge, ugboro na ego (ego)RFM) metrik na-ebute ụzọ dabere na mmasị ịzụrụ. A naghị etinye usoro a na CRM bụ isi ma na-achọkarị ngwa mpụga iji nyochaa na akara.
Ala – Kedu otu esi ekenye ndị na-ere ahịa gị na akaụntụ? Ndị ụlọ ọrụ na-enwekarị ụlọ ọrụ, ókèala, ma ọ bụ ọbụna ọrụ dabere na nha ụlọ ọrụ ahụ iji jikọta ndị na-ere ahịa ha kacha mma na akaụntụ kwesịrị ekwesị. Ka ị na-ebubata CRM gị na mmejuputa ma ọ bụ na-arụ ọrụ iji hichaa akaụntụ gị dị ugbu a, ị ga-achọ ịhụ na enyochala usoro ọrụ a ka ohere ghara ịhụta ya.
Mgbe ụfọdụ, ụlọ ọrụ ndị anyị na ha rụkọrọ ọrụ na-amachichi akaụntụ na ndị na-ere ahịa ha na CRM ha na-arụkọ ọrụ. Mmejuputa atumatu dabere na akaụntụ isi, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ibuba ọtụtụ azụmaahịa kama ịgbalị ibuga ọgbakọ niile. Nke a nwere ike inye ihe ọmụmụ ihe ndị otu ndị ọzọ kwesịrị ịhụ uru CRM gị bara.
Ndị ọrụ gị nwere ike na-ekpebi oge ị ga-ebughari… otu ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa bụ ndị na-ahụ maka teknụzụ ga-ebukarị ojiji yana ngwa ngwa ROI nke CRM ị na-ebuga kama ịbụ ndị ọrụ ewepụrụ.
Kwụpụ 2: wulite njikọ gị na CRM
CRM na-enweghị njikọta na-etinye ntakịrị ibu na ibu ọrụ n'aka ndị ọrụ gị ijikwa na melite. Ọ bụghị ihe achọrọ iji jikọta CRM gị, mana a na-atụ aro ka ị nyochaa sistemu gị wee hụ ike ị nwere iji kwalite data CRM gị.
Na-edu - Ekwesịrị itinye ihe ntinye niile maka ụzọ n'ime CRM gị yana data niile achọrọ yana isi iyi sitere na otu ha si bịa.
Enhancement - nyiwe ndị ọzọ ọ bụla iji kwalite data akaụntụ site na iji firmagraphic na ozi ọkwa kọntaktị nwere ike inyere gị aka iru eru na usoro ịre ahịa.
Aka – ebe ọ bụla emetụ aka ị nwere nke na-enyere aka na njem onye zụrụ ya. Nke a nwere ike ịbụ nleta saịtị, sistemụ ịkpọ ekwentị, ịzụ ahịa email, usoro nhota okwu, na sistemụ ịgba ụgwọ.
Omume dị oke mkpa iji kwalite usoro ịre ahịa gị n'ime CRM na, mgbe mgbe, a na-atụfu njikọ dị mfe nke nwere ike inyere ndị ahịa gị na ndị ahịa gị aka n'ụzọ dị egwu iji melite arụmọrụ. A nchọpụta data bụ ụzọ dị mma iji dekọ ma chọpụta ohere maka ịmekọrịta njikọ gị yana akpaaka ọ bụla iji mekọrịta sistemu na CRM gị.
Kwụpụ 3: Na-eme atụmatụ ịre ahịa gị na CRM
Ugbu a ị nwetala ọmarịcha data, nzọụkwụ ọzọ bụ ịghọta njem onye zụrụ gị ka ị nwee ike nke ọma:
Kpebie ihe a ụzọ ruru eru ịre ahịa (MQL) bụ inye onye ndu maka onye na-ere ahịa.
Kpebie ihe a ahịa ruru eru (SQL) bụ ịmata ụzọ bụ, n'ezie, onye ahịa kwesịrị ịchụso.
Mepụta mmalite gị usoro ire ere iji chọpụta nzọụkwụ ndị nwere ike ime site n'aka onye na-ere ahịa gị iji kwalite ndu na ohere. Nke a nwere ike ịbụ naanị mmalite oku ekwentị iji kesaa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ma ọ bụ ngosipụta nke ngwaahịa gị. Nke a bụ usoro kwesịrị ịdị na-ebuli elu ka oge na-aga.
Tinye gị ahịa foneelu nzọụkwụ na akaụntụ gị dị ma kenye usoro ihe omume maka ndị na-ere ahịa gị iji tinye aka na atụmanya gị.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere a dashboard nke ire ere nke na-enye ma nleba anya na nleba anya na akaụntụ gị.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere a dashboard arụmọrụ na-enye ma a visualization na nghọta akụkọ n'ime ahịa ndị nnọchiteanya 'ọrụ nke mere na ị nwere ike nchịkwa na ndụmọdụ ha.
Usoro a na-amalite mmezu nke usoro ịre ahịa ọhụrụ gị yana ọ dị oke mkpa na gị na ndị otu gị na-emekọrịta ihe iji chọpụta okwu ọ bụla pụtara ìhè na-eme ka mgbochi ụzọ na-aga nke ọma n'iji CRM na-ebute ụzọ na mee ka ọrụ ahịa ha dịkwuo elu. N'oge a, omume ụlọ na àgwà iji CRM dị oke egwu.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ eguzobela CRM ha, ha nwere usoro ịzụ ahịa na ọzụzụ iji hụ na ndị mmadụ maara ihe a na-atụ anya ka ha mee na CRM iji jikwaa ohere ha nke ọma. Nsogbu m na-ahụkarị bụ na ndị mmadụ anaghị eme ihe e kwesịrị ime ma bụrụ ndị a zụrụ azụ ime. Mmemme anyị nwere ike ịnya ma tụọ nrube isi na omume ndị a. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ikike ijikwa ohere site na ọkwa dị iche iche nke usoro ịzụ ahịa ụlọ ọrụ dị, Otú ọ dị, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-ahọrọ (n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè) ka ha ghara ijide onwe ha ma ọ bụ ndị ọrụ ha maka ịbanye ozi n'ime usoro ahụ dị ka. ohere na-aga n'ihu n'oge na agbanwe agbanwe.
Nzọụkwụ 4: Nleba anya na nkuzi arụmọrụ
Njikọ aka nke ụlọ ọrụ anyị iji nyere ndị ahịa aka (ọkachasị Salesforce) n'inweta nloghachi na ntinye ego teknụzụ ha na-amalite na Nzọụkwụ 1 ruo 3… anyi:
Ndu isi - anyị na-emejuputa akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ usoro akpaaka nke na-ejikọta RFM n'ime usoro ndu ha n'ozuzu iji nyere ndị na-ere ahịa aka ilekwasị anya n'inweta ha na ohere iwelie elu.
Arụmọrụ Nnọchiteanya Ọrịre - anyị na-enye ndị ahịa anyị ma akụkọ arụmọrụ yana mmepe ọkachamara iji mee ka arụmọrụ dị n'otu n'otu na ọkwa otu.
Mmepe ndu ndu ire ere - anyị na-enye ndị isi ahịa ahịa nke ndị ahịa anyị akụkọ na mmepe ọkachamara iji kwalite arụmọrụ nke ndị nnọchi anya ahịa ha na ndị otu.
Nkwupụta nhazi - anyị na-azụlite akụkọ maka ndị isi ndị isi n'ime otu nzukọ (n'èzí ahịa na ịzụ ahịa) iji ghọta arụmọrụ dị ugbu a yana ịkọ ọganihu n'ọdịnihu.
Enwere ụlọ ọrụ ndị nwere ike ime mgbanwe ma mee nke a n'onwe ha, mana ọ na-achọkarị onye nke atọ iji nye nyocha, ngwá ọrụ, usoro na nkà iji ghọta nke ọma itinye ego CRM ha.
Na-akọwa ihe ịga nke ọma CRM
Ntinye ego CRM gị emebeghị nke ọma ruo mgbe i mezuru ebumnuche atọ ndị a:
Nghọta - Onye ọ bụla so na nzukọ gị nwere ike ịlele ọrụ oge n'ime ahịa gị na usoro ịre ahịa n'ime CRM gị iji ghọta ka nzukọ a si arụ ọrụ maka ebumnuche uto ya.
Nrụ ọrụ – Your marketing na sales otu now nwere actionable ọrụ na ihe mgbaru ọsọ kenyere na-enyere ha aka accelerating gị nzukọ si ahịa mgbalị na ahịa uto maka ọdịnihu… bụghị naanị ọzọ nkeji iri na ise.
Nkwenye – Ndị otu gị niile Kwere na data ha na-enweta na Kwere na itinye ego ha na CRM na-enyere ha aka n'ụzọ ziri ezi na-enyocha, nyocha, na-eme atụmatụ, na-ebuli elu, na ibu amụma ahịa na ahịa ha.
Ihe ọzọ dị na mmejuputa CRM bụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-ejikọta ya na omenala na-akụ nọmba ha maka nkeji iri na ise ọ bụla ma ọ bụ njedebe nke afọ. N'ihi ya, CRM na-atụgharị n'ime obere oge na-elekwasị anya ebe ndị ahịa 'ịzụta cycles nwere ike ịbụ ọtụtụ afọ. Actionability bụghị naanị see oke nkwụghachi ụgwọ, ọ bụ maka idu ndú embed a omenala ịzụlite na ọrụ nke ga-enyere ụlọ ọrụ na-eto eto ahịa funnel maka afọ na-abịa.
Ọ bụghị otu ma ọ bụ nke ọzọ nke ọ bụla n'ime ihe mgbaru ọsọ ndị a… atọ a ga-ezute tupu otu nzukọ ahụ ya nloghachi na teknụzụ itinye ego na CRM.
Ndị ndụmọdụ nhicha data CRM
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-akwaga na CRM ma ọ bụ na-agbasi mbọ ike ịghọta ikike nke CRM gị ugbu a, nweere onwe gị ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ m, Highbridge, n'inyere aka. Anyị nwere usoro egosipụtara, ngwa ọrụ na ndị otu dị njikere inyere nzukọ nha ọ bụla aka. Anyị arụla ọrụ n'ofe ọtụtụ ụlọ sọftụwia CRM ma nwee ahụmịhe pụrụiche na Salesforce Sales Cloud.
Nkpughe: Abụ m onye nrụpụta na onye mmekọ Highbridge.
Tags: mechie ahịaCRMcrm akpaakaonye na-ahụ maka mkpocha crmonye ndụmọdụ crmdata crmcrm data nhichacrm mmejuputa iwumwekota crmnjikwa mmekọrịta ndị ahịahighbridgeokpokorondu akaraụzọ ruru eru ịre ahịammkwigwe ojiidashboard ahiaụlọ nkwonkwo ahịadashboard nke ire ereọhụhụ ahịa oluahịa ahịaohere ire erearụmọrụ ahịausoro ire ereahịa ruru erundị ahịasalesforce ahịa ígwé ojii